Shayela @ + 91-993.702.7574 ukwazi i-15 yethu ku-25 Seater Tempo Traveler Price eBhubaneswar
Ufuna ukuhamba okungahambi kahle lapho uya khona, eBhubaneswar? Amatshe amatshe'Ac Tempo Inani labashayeli eBhubaneswar ngokungangabazeki lihle kakhulu. Isevisi oyitholayo yiyona engcono kakhulu edolobheni. Ukuqasha Umhambi Wemimoya kuyindlela enhle yokuhamba uma ukhona ukuhamba eqenjini. Umhambi we-ac Tempo kungaba yizimoto ezinkulu ezinhle zokuhamba okude / okude noma noma yikuphi ukuvakasha. I-Sand Pebbles 'inikezwa nge-Price Tempt Traveler best eBhubaneswar. Sinikeza izivakashi ezihlukahlukene ze-Tempo eziqashisayo kubandakanya i-Tata Winger 15, i-17, i-19, isihlalo se-21. Ithimba lethu lizokusiza ukuthi uhlele uhambo lwakho oluphelele ngaphandle kwenkinga. Abashayeli bethu banolwazi olujulile, baqiniseke ukuthi uhambo lwakho luhamba kahle. Hlola umhambi wabahambahambayo eBhubaneshwar ukuthola umbono wezinsizakalo zethu. Sibeka umcabango omkhulu nokuzikhandla ekwenzeni ukwaneliseka kwamakhasimende ukuze bakwazi ukuthola uhambo olukhululekile nokuphumula.
I-Odisha yokuvakasha okokuqala? Noma unosuku lokubuka indawo olubhukwe? Kufanele uqashe umhambi we-25 Seater Tempo uma uhamba eqenjini. Ngokuningi kokubona ku-Odisha, ukuqasha umhambi we-Tempo kuyindlela engcono kakhulu yokuhamba futhi ubone konke. Qiniseka ngokuphepha nokududuzeka kwakho, ngesikhathi uhambo, ngoba zonke izimoto zihlolwa kahle ngaphambi kokuqasha.
Isevisi yehora le-24- Sinikeza isevisi yehora le-24 kuwo wonke amaklayenti ethu, ngaphandle kokulibaziseka. Singomunye wabahambi beTem Best Best eBhubaneswar, sinikezela ngamasevisi ethu amakhwalithi ethukhwalithi.
Ikhwalithi- Sihlale sizinikele ekukhonzeni amaklayenti ethu ngokunethezeka okukhulu. Zonke i-Tempos zethu ziyizinkanyezi ezingu-5 ezilinganisiwe. Singuye kuphela inkampani yokuthutha abagibeli e-India enikezwe umklomelo wekhono lomthengi ngokusebenzisa i-European Foundation for Quality Management.
Ukuqeqeshwa Nokushayela Nokushayela- Siqinisekisa ukuthi abashayeli bethu banokuqeqeshwa nokuhlolwa okufanele ngaphambi kokuhlinzeka ngamakhasimende. Siyaqinisekisa ukuthi abashayeli bethu baqeqeshwa ngezoQala ngezozimo eziphuthumayo. I-tempo ngayinye ihlolwe ngaphambi kokushiya indawo yethu.